I-Charlotte Shack, Pacific Palms/Blueys Beach
Charlotte Bay, New South Wales, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Kate
Indawo eyingqayizivele yesimanje yokuma yamahhala eklanywe ngokwezakhiwo futhi yazuza imiklomelo yokuhlala kumahektare angasese angu-5 imizuzu nje ukusuka ogwini. Inamagumbi okulala amabili, amagumbi okugeza amabili anendawo eyanele yangaphandle ebheke i-bushland enhle ihlinzeka ngendawo ethule yamaciko/ababhali noma iholide eliyingqayizivele lasogwini. Kukhona idamu kule ndawo kanye nezitebhisi ezimile ezindlini zokuhlala ngaphakathi okwenza lingafaneleki izingane ezincane.
Ngenxa yezimo zamanje sicela zonke izihambeli ukuthi zigonywe ngokugcwele i-COVID ngaphambi kokufika.
Idizayinelwe futhi iphethwe abaklami bendawo, le ndlu inikeza ulwazi oluyingqayizivele ngempela ekubalekeni kwakho ogwini. Yakhiwe ngamapulangwe endawo, izitini ezigaywe kabusha, izimpawu ezigaywe kabusha futhi i-Colorbond ihamba phezu komhlaba ngokubheka okuyimfihlo ku-canopy yesihlahla. Amandla elanga, amathangi amanzi kanye nomklamo welanga ongenzi lutho kwengeza iziqinisekiso ze-eco zalesi sakhiwo.
Izivakashi zifika ngomgwaqo omazombezombe odlula idamu (futhi ngokuvamile ama-wallabies ahlala khona) ziya endaweni enkulu yokubeka izimoto eyodwa enendawo eyengeziwe yamabhayisikili, amabhodi nezinye izinto zokusebenza. I-walkway ibe isiholela ukudlula endaweni yokubeka ebhodini lokuntweza kanye neshawa yangaphandle iye endaweni enkulu emboziwe yokuzijabulisa. Isitezi sinebha yasekuseni, itafula lokudlela nezihlalo, i-BBQ kanye nendawo yokuhlala abantulayo. Lokhu kungavalwa eningizimu ngephaneli enkulu eshelelayo uma kudingeka.
Indlu ngokwayo inokufakwa kwekhiphedi, ngakho-ke akumele ukhumbule okhiye lapho uphumela ogwini, kanye namafasitela amakhulu abheke enyakatho abheke ngasehlathini. Kukhona ikhishi lesimanje eline-cooktop yokungeniswa, amabhentshi amatshe, i-microwave nohhavini omncane. Zonke izinto zokupheka eziyisisekelo kanye nezisekelo zasekhishini nazo zinikezwa. Indawo yokuhlala evulekile inetafula lokudlela elivulekile le-Sydney Blue Gum elinezitulo zebha, umlilo wezinkuni ovuthayo kancane kanye nendawo yokuhlala. Kukhona i-wifi etholakalayo esizeni kanye ne-USB eyanele namandla okuxhumana, nokho ayikho i-TV. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nendlovukazi, indawo yokulenga kanye nendawo yedeski. Indawo engasempumalanga efinyeleleka kuleli gumbi iyindawo enhle yokuhlala futhi ube nekhabethe yasekuseni elangeni. Kunendawo encane yokuphumula epholile ngaphezu kwaleli kamelo lokulala efinyelelwa ngesitebhisi esigxilile futhi. Igumbi lesibili lokulala linombhede owodwa phansi kanye nombhede owodwa endaweni yokulala ephezulu efinyelelwa ngeladi. Kukhona ne-hammock enkulu phakathi kwe-loft yokulala nophahla kuleli gumbi. Izingane ziyayithanda le ndawo ye-hangout! Igumbi lokugezela elikhulu elihlala phakathi kwamagumbi amabili okulala line-WC, ishawa kanye nokugeza.
Indawo futhi inendawo yokuwasha, igceke elincane elingemuva elibiyelwe kanye nendlu yangaphandle yamapulangwe enombono wehlathi!
Qaphela: ‘Umjondolo’ ulungele umndeni omncane noma izithandani. Isakhiwo samagumbi nemibhede singase singafanelani nezivakashi ezi-4 zabantu abadala. Uma kwenzeka izihambeli ezi-4 zabantu abadala zicela ukuhlala, kungase kufakwe enye inkokhiso.
Ibhuloho elihle lehlathi elinezinyoni eziningi, ama-wallabies nezinye izilwane zasendle. Imizuzu engu-5-10 kuphela ukusuka eCellito beach, Sandbar, Blueys beach, Boomerang beach, Elizabeth beach, Wallis lake, Smiths Lake, Wallingat national park kanye neBooti Booti National Park.
Abanikazi bahlala ngakumakhelwane futhi ngokuvamile batholakala ezivakashini uma kudingeka ngesikhathi sokuhlala kwabo. Uma ngesizathu esithile abanikazi bengatholakali kukhona umphathi wendawo ongaphendula noma yimiphi imibuzo futhi anikeze usizo lapho bengekho.
Abanikazi bahlala ngakumakhelwane futhi ngokuvamile batholakala ezivakashini uma kudingeka ngesikhathi sokuhlala kwabo. Uma ngesizathu esithile abanikazi bengatholakali kukhona ump…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-5027-2
Hlola ezinye izinketho ezise- Charlotte Bay namaphethelo